Bill New York wuxuu higsanayaa inuu si ku meel gaar ah u joojiyo Bitcoin Macdanta | Laga soo bilaabo Linux
Laga soo bilaabo sannadihiisii ​​hore, Saamaynta tamarta bitcoin ma joojin in laga hadlo, inkastoo mawduuca ayaa sanado badan laga soo saaray warbixino kala duwan taas oo mararka qaarkood is barbardhigta tamarta looga baahan yahay macdanta bitcoin iyo isticmaalka tamarta sanadlaha ah ee waddamo gaar ah, waligood ma kicin ficillo la taaban karo oo ay sameeyeen dawladuhu.
Dareenkan, Gobolka New York ayaa hogaaminaya noocaan ah marka la soo bandhigayo biil lagu joojinayo macdanta cryptocurrency saddexda sano ee soo socota si loo qiimeeyo saameynteeda deegaanka.
Waana in lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay caan ka noqotay oo ay warka ka dhigtay rubuci hore ee 2021. Seeraar, oo ah kan ugu caansan iyaga, ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay abid oo ka badan $ 58,000 halkii qadaadiic bishii Febraayo.
Lacagtan dhijitaalka ah ayaa la og yahay in ay saameyn weyn oo tamar ah ku leedahay meeraha. Macdanta Seeraar waxay leedahay qiime deegaan oo aad u muhiim ah taas oo warbixino dhowr ah ay tilmaamayaan in macdanta Bitcoin ay leedahay raad kaarboon la mid ah kan Argentina. Mustaqbalka, waxay isticmaali kartaa inta ugu badan awoodda korantada sida dhammaan xarumaha xogta ee adduunka.
Si aad si cad u aragto, Senator Kevin Parker ayaa soo bandhigay sharciga 6486 Guddiga Ilaalinta Deegaanka ee Senate-ka Gobolka New York si loo mamnuuco hawlgalka xarumaha macdanta cryptocurrency ilaa gobolku qiimeeyo saameynta deegaanka.
Gaar ahaan, sharcigu wuxuu u ogolaanayaa gobolka New York inuu sameeyo joojin saddex sano ah hawlaha macdanta ee shirkad cryptocurrency ah. Tani waa hindisihii ugu horreeyay ee noociisa ah tan iyo markii ay soo baxday lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Goor dambe Dawladdu waxay samayn doontaa daraasad ballaadhan oo saamaynta deegaanka ah saamaynta ay ku leedahay gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee xarunta ka soo baxa macdanta, iyo sidoo kale saamaynta ay ku leedahay tayada biyaha, tayada deegaanka, hawada iyo duurjoogta.
Waana in bitcoin uu kordho inkasta oo ay jiraan warbixinno ku saabsan raad-raaceeda kaarboonka, maadaama ay si kooban u gaadhay heerkii ugu sarreeyay oo dhan $ 64,000 ka hor liiska tooska ah ee Coinbase, ka hor intaysan dhicin 36% ilaa $ 47,000 qiyaastii 10 maalmood ka dib.
Macdanta Bitcoin ayaa muddo dheer la dhaleeceeyay Isticmaalka tamarta sare ee tamarta iyo saameynta deegaanka, marka lagu daro xaqiiqda ah in baaritaano dhowr ah, oo ay ku jiraan daraasad ka socota Jaamacadda Cambridge, ayaa muujisay in macdanta bitcoin ee adduunka oo dhan ay isticmaasho tamar ka badan sannad kasta marka loo eego qaar ka mid ah quruumaha qaarkood.
Bishii Febraayo, warbixinnada waxay ku qiyaaseen in jahawareerka "mine" bitcoins uu soo saaro raad kaarboon la mid ah kan Argentina. Bishii Abriil, falanqayn cusub oo uu daabacay cilmi-baaraha Dutch Alex de Vries, aasaasaha Digiconomist, ayaa muujiyay in kor u kaca qiimaha bitcoin uu sidoo kale horseedayo isticmaalka tamarta sare. Waxay soo jeedinaysaa in isticmaalka tamarta bitcoin uu ku dhow yahay isticmaalka wadajirka ah ee dhammaan xarumaha xogta adduunka oo la isku daro, oo ay saameyn weyn ku yeelan karto deegaanka iyo siyaasadda caalamka.
Macdanta 'Cryptocurrency' ayaa sii kordhinaysa yaraanta chip-ka caalamiga ah oo xataa khatar ku ah amniga caalamiga ah. Tani waa gabagabada faallooyinka Alex de Vries ee maqaalkiisa cinwaankiisu yahay "Bitcoin Boom:
taas oo macnaheedu yahay korodhka qiimaha isticmaalka tamarta laga soo bilaabo shabakada ", kaas oo lagu daabacay joule magazine. Sida Bill Gates, bilyaneerka Charlie Munger wuxuu qabaa in "bitcoin ay tahay wax laga yaqyaqsado oo ka soo horjeeda danaha ilbaxnimadeena." Dareenkan, wuxuu xukumaa in bitcoin uu u xun yahay meeraha. "Waan necbahay guusha bitcoin mana taageersani lacag taas faa'iido u leh sharci-darrada," ayuu yidhi.
Warbixinta waxaa la socon doonta 120 maalmood oo ra'yi dadweyne ah iyo ugu yaraan hal dhegeysi dadweyne. Biilkani wuxuu ku soo beegmayaa xilli warshadaha cryptocurrency ay kor u kacayaan, kobaca ay kicinayaan Bitcoin iyo Ethereum, qiimaha kaas oo si degdeg ah u koraya tan iyo Abriil.
Shirkadda waalidka ee warshadda, Greenridge Generation Holdings, ayaa la filayaa inay si guud ugu soo baxdo midowga Maraykanka sanadkan.
Korsashada ka dib, xarumaha macdan qodista ayaa loo arkaa inay waxyeelo yihiin, taas oo ah, kuwa ka jeediya dawladda yoolalka qiiqa ah ee lagu dejiyay Xeerka Hoggaaminta Cimilada iyo Ilaalinta Bulshada ee 2019, ma heli doonaan rukhsadaha lagama maarmaanka ah si ay dib ugu shaqeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Biilka New York wuxuu ujeedkiisu yahay inuu si ku meel gaar ah u joojiyo macdanta dhirta dhirta